Sarkaal ka tirsan dowladda oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal ka tirsan dowladda oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in qarax miino oo ka dhacay deegaan ku dhaw degmada Wanlaweyn ay ku dhinteen sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo labo askari kale, iyadoona lix kale ay ku dhaawacantay.
Qaraxaasi oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la sheegayaa inuu ku dhintay Maxamed Cabdi Saciid Oomane, kaas oo ka mid ahaa saraakiisha ka tirsan DANAB ee dhawaan la dalacsiiyay.
Sidoo kale, qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 2 askari kale oo la socotay sarkaalka dhintay, iyadoona lix kale ay ku dhaawacantay, sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinka gobolka Sh/hoose.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda gobolka Sh/hoose C/fitaax Xaaji Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sarkaalka qaraxa ku dhintay iyo ciidanka la socday ay xilligaasi kusii jeedeen xerada Ballidoogle.
“Qarax miino ayaa waxay haleeshay gaari ay la socdeen ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo kusii jeeday xerada Ballidoogle, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday seddax askari oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen, sarkaalka geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Saciid Oomane, wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha dhawaan la dalacsiiyay ee ka tirsanaa DANAB.” Sidaasi waxaa yiri C/fitaax Xaaji Cabdulle.
Dhinac kale, dhaawacyadda askartii kale ee qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho, si halkaasi loogu daaweeyo, sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo gobolka Sh/hoose qarax miino lagula eegto ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoona ay xusid mudan tahay in wadada xiriirisa garoonka Ballidoogle iyo degmada Afgooye ay ka buuxaan miinooyin ay Al-shabaab halkaasi ku aaseen.